यो रसायनले आउन दिँदैन दिमागमा नराम्रो विचार ! – Sodhpatra
यो रसायनले आउन दिँदैन दिमागमा नराम्रो विचार !
प्रकाशित : १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार २१:०२ February 28, 2021
रसायनले दिमागको स्मरण क्षेत्रमा असर गर्नेछ । जर्नल अफ नेचर कम्युनिकेसन्समा प्रकाशित अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार, दिमागमा विचार आउने नआउने कुरा न्युरोट्रान्समिटरमा निर्भर रहन्छ । यो दिमागको नर्भ सेलमा सन्देश पु–याउने एक किसिमको रसायन हो ।
एन्डरसनका अनुसार, एक परीक्षणमा गाबाको प्रयोग स्ट्रेस, डिप्रेसन वा कुनै घटनाबाट घात पुगेका मानिसमाथि गर्दा उनीहरूको खराब यादहरू सजिलै बिर्सन सहायता पुग्यो । अर्को शब्दमा भन्दा मानिसले आफ्नो दिमागमा नियन्त्रण गर्न सके । एन्डरसनका अनुसार, यसलाई सप्लिमेन्टका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले मानिस डिप्रेसनबाट पनि बच्न सक्छन् ।